La cusbooneysiiyay: Sidee loo helaa astaamahaas sameeya X100 ka hor inta aan la daahin? - Cazoo
Bogga ugu weyn » Bogga ugu weyn » La cusbooneysiiyay: Sidee loo helaa astaamahaas sameeya X100 ka hor inta aan la daahin?
Tag: Cilmi baaris, BSCSCAN, cake, dukumentiyada, DIOR, ETHERSCAN, GitHub, ICO, Icodrops, hababka ogolaanshaha, Medium.com, Messaria, Qandaraasyada smart, da'ada, Token, calaamado, X100, Youtube
Waqtiga akhriska: 11 minuti
Marka laga hadlayo lacagta loo yaqaan 'cryptocurrency' malaha wax ka muhiimsan ma jiraan "Samee cilmi baaris adiga kuu gaar ah".
Samee Cilmi Baaristaada, waxaad dhahdaa dadka ku hadla Afka Ingiriiska. DIOR.
Macluumaad badan ayaa jira oo way adkaan kartaa in la fahmo waxa dhabta ah iyo kartida, waxa dhabta ah oo aan lahayn awood badan, ama waxa jira oo kaliya oo sugaya inay kaa jiidaan. Si kastaba ha noqotee, haddii aad dhab ahaantii rabto inaad go'an tahay, waxaad u baahan tahay inaad barato sida loo sameeyo cilmi-baaristaada - aan aragno sida aad u ogaanayso haddii ay tahay crypto in laga fogaado ama laga yaabo in ay mudan tahay in la haysto.
Haddii ay tani tahay markii ugu horraysay ee aad bogggan akhrido, waa lagusoo dhaweynayaa, ama lagu soo dhoweynayaa. Halkan waxaan ugu qoreynaa Cazoo, Cazoo, si aan ugu qancino dhaqaalahan adag, cilmiga bulshada iyo wixii ka sarreeya fikradaha farsamada maskaxda. Waa warqad qoraal ah oo aan u baahanahay oo aan kula wadaago, waana ku faraxsanahay haddii ay wax kuu tari karto. Xaqiiqdii, haddii maalin uun aad iska qorto Binance maxaad u sameyn weyday lambarkayga gudbinta? Labadeenaba faa'iido ayaan helnaa, labadaba 20% qiimo dhimis ah guddiyada. Maxaa diidaya!
Laakiin ma ihi lataliye dhaqaale. Kula talin maayo sida lacagtaada loo maalgaliyo. Kama caawiyo cidna inay adeegsato shabakaddan sharafta leh ee xannibaadaha iyo daloolada. Maalgelinta lacagtaada oo aad ka dhigto midho dhal waa riyada qof walba, oo haddii ay noqoto waddo aad rabto inaad qaaddo, talada kaliya ee aan siinayaa waa inaan ku sameeyo taxaddar aad u sarreeya.
Sidii caadada u ahayd, waxaa jira tusmo hoose, sidaa darteed waxaad ugu boodi kartaa qaybta aad xiiseyneyso. Sikastaba, waxaan kugula talinayaa inaad wada aqriso.
Wajiga 1aad: Waxqabadka suuqa
Wajiga 2aad: Cilmibaadhistii ugu horreysay
Wejiga 3aad: Baadh ilaha
Tallaabada 4: Hubinta laba-laab: laba-hubin
Wejiga 5aad: Warka iyo RoadMap-ka
Tallaabada ugu horreysa ee lagu bilaabayo cilmi baarista ugu wanaagsan ee loo yaqaan 'Cryptocurrency X100' oo laba toddobaad gudahood lagu sameyn doono ayaa ah inaad isweydiiso: qadaadiicani waa mid dhaqaale ahaan firfircoon? Waxaan soo arkay mashaariic badan oo rajo galinaysa cryptocurrency, kaliya si markaa loo xaqiijiyo sida ay lacagta ugu firfircoontahay suuqa dhexdiisa and way dhimatay bilo ama xitaa sanado.
Tag degel sida coinmarketcap.com ama coingeko.com si aad u aragto haddii ay tahay lacag nool, haddii ay jirto wax dhaqdhaqaaq ah, macaamil ganacsi lala sameeyo, hubi inaad hubiso mugga ganacsiga iyo sida qiimaha u socdo.
Kaliya maahan in calaamadaasi lagu qoro isweydaarsiga sumcad wanaagsan, laakiin mugga ganacsiga ee suuqaas sidoo kale waa inuu ahaadaa mid aad u sarreeya, waxaan dhihi lahaa muhiim: haddii aysan ahayn, waxaad isku arki kartaa inaad bixiso 'ikhtiyaarka lacagta caymiska tan iyo markii dalbo buug kuma wareegin xisaabin ku filan.
Haddii calaamadda aad isha ku haysaa ay tahay calaamadda ERC20, oo lagu iibiyo ku dhowaad gaar ahaan DEX sida Uniswap, hubi inaad ku socoto taxaddar, maadaama DEXs aysan lahayn shuruudo ama shuruudo qiimeyn aan la dhaafi karin. Waxaas oo dhami maahan SABABTA looga baxayo mashruuc, laakiin waa wax maskaxda lagu hayo marka aad horay u socoto.
Qiimuhu waa fure, laakiin intaas maahan. Aynu u qaadanno in cryptocurrency-ka aad dooratay uu leeyahay koror dhaqaale oo xalaal ah. Waa waqtigii fikrad laga heli lahaa waxa uu yahay iyo sida uu u shaqeeyo.
Youtube xaqiiqdii waa meel fiican oo laga bilaabi karo. Laakiin waxaa jira fowdo badan. Taasi waa sababta taladaydu tahay in la beddelo Messaria, Cilmi baaris, iyo goobta kormeerka ICO sida Icodrops. Iska Dhig Ku Noqoshada Dugsiga: Markaad isticmaaleyso agabkan hubi inaad qorto oo aad qorto wixii su'aalo ah ee aad qabto. Hadda uma baahnid iyaga, ma heli doontid jawaabaha. Laakiin hadda iskuma dayeyso inaad hesho jawaabahaas laakiin waxaad billaabeysaa safar.
Messari: astaanta astaanta CAKE
Messari waa aalad awood badan oo aad u adeegsan karto falanqaynta lacagaha loo yaqaan 'cryptocurrencies'. Qaybta aan u maleynayo inaad xiiseyneyso waa tan astaanta astaanta 'crypto' ee aad xiiseyneyso. Wiilasha Messari waxay sameeyaan falanqeyn dhammaystiran oo ay ku jiraan taariikhda cryptocurrency, calaamadaha calaamadaha iyo qoondaynta calaamadaha. Waxay gaarayaan heer aad u faahfaahsan oo faahfaahsan iyo xitaa jadwal horumarineed hore iyo lacag ururin iyo waliba khariidad loogu tala galay mustaqbalka mashruuca.
Qor magacyada dhammaan dadka muhiimka ah ee ku lug leh mashruuca, sida aasaasaha iyo agaasimaha guud (adigoo u maleynaya inaysan isku qof ahayn) .. waad u baahan doontaa goor dambe.
Cilmi baaris ay sameysay Binance taa badalkeedana waxay qaadaan qaab farsamo oo dheeri ah si ay u falanqeeyaan calaamo kasta. Aad ayey waxtar u leedahay in cilmi baaris lagu sameeyo goos gooskan, si loo fahmo qaybaha ugu muhiimsan ee loo yaqaan 'crypto' iyo sida ay u shaqeyso.
Waxa ugu weyn ee ku saabsan cilmi baarista ay sameeyeen Messari iyo Binance ayaa ah maxaa yeelay iyagu waa xiddigaha Hollywood ee ku jira meesha loo yaqaan 'crypto space', heer sare oo xirfadlenimo ayaa laga filayaa iyaga. Iyagu maahan lo 'cayillan oo keliya: macluumaadka ku saabsan Messari iyo Binance ma ahan kuwo cusub. Runtii ma eedeyn kartid iyaga: waxay sameynayaan wax badan… laakiin taasi waa caadi sidoo kale. Horayba waa dharbaaxo ugu horreysa oo kuu sheegaysa: ha u qaadan wax ay qolo saddexaad qortay inuu yahay dahab saafi ah, marmarsiiyo ahaan inaad u joojiso cilmi-baaristaada oo dhan, xitaa haddii ishaas si aad ah loo yaqaan.
Goobaha raadinta ICO, sida Icodrops, waa wax ka mid ah mashiinka waqtiga: qaas ahaan crypto waxay sameeyeen sawirro duug ah iyo dukumiinti aan hadda laga heli karin bogga. Marka way fududahay in la ogaado haddii mashruuc loo yaqaan 'cryptocurrency' uu bedelay jihada uu u socday, ama haddii ay si fudud isku dayayso inay aasto wixii la soo dhaafay. Nasiib darro wadarta lacagta la ururiyey ee ay soo sheegaan Icodrops iyo bogagga la midka ahi had iyo jeer sax ma aha, waxayna u egtahay in lagu daro dhammaan lacagaha la soo ururiyey labadaba maalgelinta gaarka loo leeyahay iyo iyada oo loo marayo ICO badan. Xusuusnow inaad had iyo jeer raadiso sawirro ama jaantusyo aad si cad ugu arki karto burburka calaamadda, sida lacagta loo soo ururiyey iyo halka calaamadaha loo qoondeeyey.
Messari wuxuu qabtaa shaqo wanaagsan oo ah dabagalka maalgalinta calaamadaha iyo qoondaynta - waad iskutallaabi kartaa macluumaadkan Icodrops si aad ugahesho sida mashruuca loo bixiyay 'crypto' uu u kordhiyay raasamaalkiisa. Waxa aad halkan ka raadineyso waa calaamadeyn calaamadeyn ah oo aan kaa dhigeyn inaad rabto inaad cararto .. qaasatan waxaad dooneysaa inaad hubiso in astaamaha la soo saaray ama la soo saari doono badankood ay ku jiraan gacanta bulshada oo aysan ku jirin jeebabka dadkii mashruucan aasaasay! Kuwa haysta astaamaha ugu badan ayaa suurtagal ah inay iibiyaan markii qiimaha uu bilaabo inuu kaco, taas oo ka hortageysa lacagta shilin inay ku kororto qiime ahaan.
Sidii hore oo kale, maahan in haddii xaaladan ay dhacdo, mashruuca oo dhan uu yahay mashruuc la iska tuuro. Laakiin waa inaad aad u taxaddartaa markaad aragto sawir sidan oo kale ah, adoo hubinaya astaamaha calaamadaha 'crypto' ee Binance Research ama Messari:
Jadwalka Soosaarida Tok Token
Hadda waxaad hubisay wax walba, waa waqtigii aad dib ugu laaban lahayd Youtube. Maaddaama aad ku kalsoon tahay crypto, hadda oo aad si fiican u fahamtay, bal aan maqalno waxa kuwa abuuray ay leeyihiin. Soo qaado magacyada aad ku xasuusatay inaad qorto, magacyada dadka muhiimka ah ee ku lug leh mashruuca. Hawshaada xigta waxay noqon doontaa inaad hesho wareysiyadii ugu dambeeyay ee ay qabteen. U diyaari siday u kala horreeyaan una fiirso inta aad awooddo!
Araggu waa aamminsan yahay: Daawashada wareysiyada xubnaha muhiimka ah ee mashruuca 'crypto' ee aad raacdo waxay ku siinaysaa macluumaad urursan macluumaad aad meel kale ka heli doonin. Intaas waxaa sii dheer, wareysiyadan ayaa badanaa waxbadan iga caawiya sidii aan u fahmi lahaa waxyaabaha farsamo ee mashruuc ah ee laga yaabo inaan ku adkaado inaan fahmo si fudud anigoo aqrinaya dukumiintiyada, inta badanna laga helo goobta loo yaqaan 'crypto' Intaad kujirto, hubi astaamaha LinkedIn si aad u aragto inay haystaan ​​aqoonsi wanaagsan. Haddii ay ka shaqeyn jireen Google ama Microsoft ma fiicantahay? Haa, haddii shaqaalayntu aysan socon dhowr bilood. Haddii shaqada laga eryey maxaa yeelay waxay qodanayeen crypto, markaa gimme shan! Raadi kanaalka Youtube ee lacagta loo yaqaan 'crypto currency' ee aad xiisaynayso! Haddii aad ku wanaagsan tahay baaritaanka, waxaad heli doontaa fiidiyowyo gaagaaban oo sharraxaya qaybaha ugu muhiimsan ee mashruuca.
Tani waxay ku dareysaa laba talaabo oo dheeri ah raadinta: xaqiiqada hubinta, had iyo jeer, wax kasta oo aad soo baratay ilaa hadda, iskuna day inaad fahanto waxa ku kaydsan mustaqbalka cryptocurrency.
Tallaabada 4: Hubinta labbaad: laba jeer hubi
Miyaad horeba u tagtay shabakadda 'crypto' si ay kuugu buuxsamaan tanno macluumaad ah? Waxaad kaliya dooneysaa inaad aqriso bogga guriga iyo qeybta macluumaadka. Inta badan macluumaadka ku saabsan degel gaar ah oo loo yaqaan 'crypto' waxay u egtahay inay yihiin koox ka mid ah waxyaabaha aan muhiimka ahayn. Sida iska cad, howlaha bangiyada iyo kuwa aan bangiyada ahayn ama sababo kale oo sharaf leh ayay sheeganayaan inay taageeraan. Intooda badan waxyaabaha guud ahaan waxtar ma leh mana noqon doonaan kuwo waxtar leh marka la ogaado haddii mashruucu u qalmo inaad fiiro gaar ah u yeelato. Tan ugu muhiimsan, waxaad halis ugu jirtaa inaad waqti badan ku lumiso daalacashada boggooda haddii aadan aqoon waxa aad raadineyso. Laakiin tan iyo markii aad xusuusatay inaad qorto magacyada qaybaha muhiimka ah ee mashruucan oo aad qortay dhammaan su'aalaha aad rabtay in laga jawaabo ... waa hagaag markaa waa waqtigii la xaqiijin lahaa in wax kasta oo aad soo baratay ay weli khuseeyaan oo ay xallinayaan su'aalahaaga ay hayaan. kacday ilaa markii aad bilawday baaritaankaaga.
Diiwaangelinta Pancakes: docs.pancakeswap.finance
Waxaad ka heli kartaa jawaabo badan adoo qodanaya qaybta u heelan dukumiintiyada .. laga yaabee inaad nasiib leedahay sidoo kale waxaa jira bar baaris waxaadna gali kartaa ereyo sida calaamado, sicir bararka, ICO, hababka ogolaanshaha, macdanta, da'ada iyo mawduuc kasta oo kale oo aad rabto inaad ka hesho faahfaahin dheeraad ah. Ma jiro wax raadis ah? Ku raadi gacanta.
Ha ka baqin haddii aadan wax fahmin isla markiiba - dukumiintiyada loo yaqaan 'crypto documentation' badanaa waa horumariyaha u janjeedha. Bogag badan waxay lahaan doonaan khadad koodh ah. Iska ilow koodhka, akhri wixii la qoray wax yar ka hor iyo ka dib. Badanaa waa koodhka qoraalka ee ugu awoodda badan.
Dukumeenti kale oo laga raadsado barta 'crypto' waa warqad cad: raadso qayb la xiriirta calaamado. Raadi a baaris xayeysiis ah ee crypto. Ma Token ERC20 ah? Kadib u tag Etherscan. Ma BEP20? Tag Bscscan.
Kuwa haya astaamaha $ CAKE
Halkan waxaad si dhakhso leh uga hubin kartaa cidda heysata calaamadaha gaarka ah, xitaa waxaad ku arki kartaa jaantuska goos gooska ah!
Horay ayaynu u sheegnay: taxaddar haddii ay jiraan boorsooyin qabta 90% astaamaha wareegga. Laakiin taasi had iyo jeer maahan kiiska: had iyo jeer waxay dhacdaa in boorsada aad ku aragto xagga sare ee liiska, kan iska leh inta badan calaamaddu, uu yahay Qandaraas Smart ah, oo loo adeegsado waxyaabaha sida da'ada.
Haddii koodhkaagu uusan ahayn calaamadda ERC20, waxaan rajeynayaa in sahamiyahooda xannibaadda uu sidoo kale kuu oggolaan doono inaad aragto liis dhammaystiran oo leh cidda haysata calaamadda. Miyaanay ahayn? CALAN CAS.
Hadda oo aad baaritaan weyn ku sameysay crypto aad rabto inaad maal gashato, waxaa jira hal shay oo keliya: raadinta cusbooneysiin muhiim ah oo mashruuca ah, haddii ay imaanayaan, haddii ay qorsheynayaan, ama ay mar horeba dhaceen.
Qeybta ugu dambeysa ee raadintaada 'crypto' waxaad u baahan doontaa saddex waxyaalood: mid Roadmap, a blog iyo wararkii ugu dambeeyay .. Waxaan kugula talinayaa, sidaan: sida caadiga ah warka waa soo koobid waxa ay ku qorayaan baloogga.
Baankeega isweydaarsiga iyo wararka
Ka faa'iideyso wararka aad ka aqriso xitaa daabacaadda yaryar: waxay ku imaan karaan waxtar leh haddii boostada ay tilmaamayaan ay aad u dheer tahay ama dhib badan tahay in la dheefshiido.
Aynu hadda ka hadalno RoadMap.
Khibradeyda, cryptocurrency RoadMaps waxay u muuqataa mid aan caddayn oo ma bixinayo macluumaadka aan dhab ahaantii raadineyno. Daawashada wareysiyada lala yeeshay aasaasayaasha iyo agaasimayaasha guud waxay bixin doonaan aragti dheer oo ku saabsan mustaqbalka mashruucooda marka loo eego RoadMap-keeda. Qeybta wanaagsan ee loo yaqaan 'crypto', waxaad ka heli doontaa khariidad wanaagsan oo ka kooban himilooyin macquul ah, oo lagu gaari karo ka hor inta mashruucu uusan dhammaan lacagaha ama lagu burburiyo tartanka. Haddii aadan helin wax RoadMap ah iyo haddii wareysiyada aad daawatay aysan ku siinaynin dareenka ah in mashruucu uu muddo dheer socon doono last laga yaabee inaad fiirineyso maalgashi qaldan.
Mustaqbalka maahan waxa kaliya ee muhiim ah: ogow haddii ay gaareen wixii ay ballanqaadeen inay sameeyaan ilaa maanta .. waxaana halkan imanaya blogga.
Blog Xiddigle: stellar.org
Haddii ay kugu adagtahay inaad ka hesho bog internet shabakadda 'crypto', fursadaha ayaa ah inaad ka heli karto iyaga Dhexdhexaad. Waqtiyada kale waa inaad tagtaa oo aad caleentaa tooda gitHub si aad u aragto horumarkooda .. intaas ka dib runti waad isweydiin kartaa in mashruucu ku socdo meeshii loo baahnaa.
Ka baaraandegidda cinwaannada mareegta ee mashruuc loo yaqaan 'crypto project' ayaa in ka badan in ku filan si loo helo fikrad ah inay run ka ahayd eraygeeda iyo jihada ay u socoto. Way fiicantahay in la tago markaa si dhab ah u akhri maqaalka oo dhan haddii cusbooneysiintaasi ay ka hadlayso cusbooneysiin muhiim ah sida kuwa la xiriira isbeddelada calaamadaha ama ogeysiis kasta oo ka hadlaya wax weyn iskaashi.
Marxaladda ugu dambeysa, fur tab cusub oo furo qaar ka mid ah boggaga wararka ee loo yaqaan 'cryptocurrency' sida Cointelegraph, Coindesk ama Decrypt iskuna day inaad hesho cinwaannada qaarkood ee loogu talagalay mashruuca aad raadineyso. Waxba ma helin? Taasi daruuri maahan inay tahay calaamad xun marka la barbardhigo warbaahinta dhaqameed, warbaahinta loo yaqaan 'crypto media' waxay wax ku qabtaan qaabkooda, had iyo jeerna ma jecla inay u sheegaan cinwaano waaweyn waxyaabaha muhiimka ah ee dhaca.
Waqtigan xaadirka ah waa inaad heysataa dhammaan macluumaadka aad u baahan tahay si aad u sameyso go'aan wanaagsan oo ah in cryptocurrency uu leeyahay qiimo dhab ah uuna ku xiran yahay mashruuc sharci ah. Haddii aadan go'aan fiican ka haysan arrintaas, waxaad u maleyneysaa inaad la macaamilayso mashruuc si aad u ilaaliso, ama xitaa aad uga fogaato. Way xun tahay in laga fikiro, laakiin sidoo kale waxay macnaheedu noqon kartaa inaad dib ugu laabato, dib ugu noqo guddiga sawirada, oo hubi ilaha aad u isticmaashay cilmi-baaristaada.
Cilmi baarista loo yaqaan 'crypto' waa shaqo badan. Laakiin isweydii: ma dhowr saacadood oo cilmi-baaris ah ayaa u qalma dib-u-celinta 100x ee maalgashigaaga? ..… ..… ..
Laakiin Cazoo! Waxaad jeceshahay Cazoo, sidee baad u sameysaa baaritaankaaga 'crypto'?
Samee raadin fiican Cazoo
Primo: Waxaan aadayaa goobta lacagta lagu iibiyo ama coingecko si aan u arko bal in calaamaddu si firfircoon uga ganacsaneyso, iyadoo la doorbidayo is-weydaarsiyo la isku halleyn karo. Qadaadiicdu ma dhimatay mise way dhimanaysaa? Waqti iskama lumiyo.
Secondo: Waxaan aadaa Youtube-ka oo aan arkaa waxa ay dadka kale ka yiraahdeen mashruuca, waxaanan qaadaa qoraalo yar haddii ay u qalanto.
Saddexaad: hubi baaritaanka Messari iyo Binance, si aad u hesho fikrad cad oo ku saabsan waxa iyo waxa mashruucu yahay iyo sida uu u shaqeeyo. Waan sii wadayaa qoraalladayda, sidoo kale waxaan bilaabayaa qorista su'aalaha qaarkood iyo magacyada aasaasayaasha.
illaiyo: hubi Icodrops si aad u aragto inta lacag ee mashruucu ku guulaystay in la ururiyo iyo sida astaamaha loo siiyay. Waxaan u adeegsadaa ilaha muujinaya aniga iyo Messari si aan u hubiyo in faahfaahinta la taxay ay sax yihiin.
Shanaad: Waxaan dib ugu noqdaa Youtube-ka waxaanan daawadaa dhamaan wareysiyada aan kari karo, oo kamid ah kuwii ugu dambeeyay, ee lala yeeshay agaasimaha guud ama aasaasaha mashruuca. Had iyo jeer waxa ay dhahaan waxay ka jawaabaan su'aalo badan oo aan ku qoray marinka labaad: sidoo kale waxay u muuqdaan inay caddeeyaan qaybo badan oo aan u maleeyay inay ku wareersan yihiin tiknoolajiyada la isticmaalay. Waxaan sidoo kale raadinayaa kanaalka Youtube ee loo yaqaan 'crypto', oo hadday jirtana waxay badanaa bixisaa aragtiyo iyo sharraxaad dheeri ah. Aniga oo u maleynaya in wax kasta oo aan ogaaday aysan hoos u dhigin xamaasadeyda,
Lixaad: qodo dukumiintiyada mashruuca. Waxaan raadsadaa wixii faahfaahin dheeri ah ee teknolojiyadda uu adeegsaday crypto-ka, farsamooyinka la isku raacsan yahay, calaamadaha calaamadaha, abaal-marinnada adag, shuruudaha macdanta, iyo wixii kale ee aasaasi ah ee aan bartay illaa hadda.
Toddobaad: Waxaan kala shaandheeyay RoadMap-kooda iyo balooggeyga si aan u arko haddii ay gaareen horumarkii ay ballanqaadeen iyo haddii ay si dhab ah u dhisi karaan una gaarsiin karaan wax kasta oo ay u baahan yihiin si ay mashruucooda horay ugu socdaan
Sideedaad: hubi haddii ganacsigoodu cinwaano ka dhigay goobta loo yaqaan 'crypto space' oo leh cinwaano waaweyn oo xiiso leh oo ku saabsan daabacayaasha waaweyn ee 'crypto'. Haddii aysan jirin cinwaano waaweyn, iska ilaali! Waxaa laga yaabaa inaan ku jirno waqti xasaasi ah oo mashruuca ah, oo waxaan halkaa ku gaarnay inta kale.
Istaraatiijiyaddan tayda ah ee ku saabsan sameynta cilmi baarista wax ku oolka ah ee loo yaqaan 'cryptocurrency' dhab ahaantii ma ahan wax xabad-joojin ah. Laakiin aniga ahaan waa isku dhafnaan dhammaystiran oo u fiirsasho, akhris iyo ku celcelin ah.
Way fududahay in la iloobo in adduunyada loo yaqaan 'cryptocurrencies' ay tahay goob aad u cusub, wax badanna wali waa bilow. Marka, haddii aad barato sida ugu wanaagsan ee lagu sameeyo baaritaankaaga crypto-cilmi-baarista hadda waxaad noqon doontaa mid ka mid ah dadka yar ee run ahaantii og waxa dhacaya markii FOMO ay ku dhacdo suuq gumeysi ... sida ay dhawaan u dhacday, Abriil 22, 2021 , ka dib hadaladii ka soo yeeray Madaxweyne Biden.
Maqaalka xigtaWaa maxay Flippening ee adduunka ee Cryptocurrencies?